Global Voices teny Malagasy · 4 Avrily 2008
04 Avrily 2008
Oktobra 2021 38 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 04 Avrily 2008
Jordana : Aterineto lafo indrindra manarakaraka an'i Marôka
Jordania04 Avrily 2008
An American in Jordan [Amerikana iray aty Jordana] no mitatitra ny halafon'ny fampiasana Aterineto any Jordania : “The Jordan Times is reporting that Jordan’s Internet prices are among the highest in the region due to the imposed 16 percent sales tax. In fact, Jordan ranks second only to Morocco, which...
Armenia : An'iza ny fitantanana ny rano ?
Armenia04 Avrily 2008
Ny blaogin'ny lalàna mikasika ny rano na Water Law Blog dia mamakafaka ny toe-draharaha mikasika ny famatsiana rano fisotro sy ny famalanana rano avy nampiasaina any Armenia, taorian'ny fianjeran'ny firaisan'ireo fanjakana Sovietika sy ny fitsofohan'ireo orinasa Frantsay amin'ny fitrandrahana izany : In Armenia, domestic water supply and sewer services are...
Zimbaboe : Ireo fiovana izay andrandrain'ireo Zimbaboeana fatratra
Zimbaboe04 Avrily 2008
Bev Clark no manangona sy mizara ao amin'ny blaogin'ny kubatana.net ireo fiovana izay andrandrain'ireo olon-tsotra fatratra any Zimbaboe: Here is more of what ordinary Zimbabweans want to see change in a free Zimbabwe. This information comes from feedback from a Kubatana.net email newsletter in which we asked for ideas ....
Zimbamboe : hatsikana politika
Tselatra · Zimbaboe04 Avrily 2008
Manoratra ny momba ny hatsikana politika ao Zimbaboe ny kamarady Fatso: “Sao mba misy mahafantatra olona manana fiarabe? Misy mantsy Lezalahy iray ho’aho te-hamindra ny fananany rehetra avy ao amin’ny tranobem-pirenena [fonenan'ny filoham-pirenena] alefa any Zvimba [ambanivohitr'i Mugabe]. Manondro ilay antidahy mpanao didy jadona hifindra monina ho any ambanivohiny io tantara hatsikana...
Zimbaboe : Ny takoritsika andrenivohitra
Harare no renivohitry ny tsahotsahon’i Zimbaboe: “Nisy nanapoaka (na ataovy hoe nanaparitaka) ny gazety hany tsy miankina amin’ny fanjakana mivoaka isan’andro noho izany dia ny tantaram-bahoaka no mba gazetim-bahoaka, miely tahaka ny bitsibitsika ampivarotan-tavoahangy ny nyayas. Nitsoaka any Malaysia [hono] i Mugabe. Nandrombaka ny 68% ny vaton'ireo mpifidy ho filoham-pirenena...